Rwiyo rwaDhavhidhi, paakanyepedzera kupenga+ ari pamberi paAbhimereki, uyo akamudzinga, akaenda. א [Aleph] 34 Ndicharumbidza Jehovha nguva dzese;Kurumbidzwa kwake kuchagara kuri pamiromo yangu. ב [Beth] 2 Ndichazvirumbidza* muna Jehovha;+Vanyoro vachazvinzwa, vofara. ג [Gimel] 3 Kudzai Jehovha pamwe chete neni;+Ngatikudzei zita rake pamwe chete. ד [Daleth] 4 Ndakanyengetera kuna Jehovha, uye akandipindura.+ Akandinunura pazvinhu zvese zvandaitya.+ ה [He] 5 Vaya vakatarisa kwaari vakafara;Zviso zvavo zvaisagona kunyadziswa. ז [Zayin] 6 Akaderera uyu akashevedza, uye Jehovha akazvinzwa. Akamununura mukutambudzika kwake kwese.+ ח [Heth] 7 Ngirozi yaJehovha inodzika musasa ichikomberedza vese vanomutya,+Uye inovanunura.+ ט [Teth] 8 Ravirai henyu muone kuti Jehovha akanaka;+Anofara murume anopotera kwaari. י [Yod] 9 Ityai Jehovha, imi mese vatsvene vake,Nekuti vaya vanomutya havana chavanoshayiwa.+ כ [Kaph] 10 Kunyange shumba dzine simba* dzakasvika pakuva nenzara,Asi vaya vanotsvaga Jehovha havana chakanaka chavachashaya.+ ל [Lamed] 11 Uyai, vanakomana vangu, munditeerere;Ndichakudzidzisai kutya Jehovha.+ מ [Mem] 12 Ndiani pakati penyu anofarira upenyuUye anoda kuona mazuva akanaka akawanda?+ נ [Nun] 13 Chidzora rurimi rwako kuti rusataura zvakaipa,+Nemuromo wako kuti usataura zvekunyengera.+ ס [Samekh] 14 Ibva pane zvakaipa, uite zvakanaka;+Tsvaga rugare, urutevere.+ ע [Ayin] 15 Maziso aJehovha ari pane vakarurama,+Uye nzeve dzake dzinonzwa kuchema kwavo vachida kubatsirwa.+ פ [Pe] 16 Asi chiso chaJehovha chinovenga vaya vanoita zvakaipa,Achiita kuti vasazoyeukwa panyika zvachose.+ צ [Tsade] 17 Vakachema, uye Jehovha akanzwa;+Akavanunura pakutambudzika kwavo kwese.+ ק [Qoph] 18 Jehovha ari pedyo nevaya vakaora mwoyo;+Anoponesa vaya vakasuruvara.+ ר [Resh] 19 Matambudziko emunhu akarurama mazhinji,+Asi Jehovha anomununura maari ese.+ ש [Shin] 20 Anochengetedza mapfupa ake ese;Hapana kana rimwe chete rawo rakatyorwa.+ ת [Taw] 21 Dambudziko richauraya vakaipa;Vaya vanovenga vakarurama vachabatwa nemhosva. 22 Jehovha anodzikinura upenyu hwevashumiri* vake;Pane vaya vanopotera kwaari hapana kana mumwe chete achabatwa nemhosva.+
^ Kana kuti “Mweya wangu uchazvirumbidza.”
^ Kana kuti “mweya wevashumiri.”